အမြန် လမ်းမှာ ကားမောင်း တဲ့ သူတွေ အထူး သတိထား ရမယ့် နေရာ (၁၆) ခု ကို ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီ – Shwewiki.com
အမြန်လမ်း တစ်လျှောက် ယာဉ်မတော်တဆမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် နေရာ ၁၆ နေရာရှိပြီး ယင်းနေရာ များ အရောက်တွင် သတိထား မောင်းနှင်းရန် အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ယာဉ်မတော် တဆမှု အများဆုံးဖြစ်သည့် နေရာများမှာ အမှတ် ၃ လမ်းဆုံ၊ ဘောနတ်ကြီး ၊ ဘောနီ၊ အုတ်ရှစ်ကုန်း၊ မြို့ချောင်း၊ ဖြူး၊ ဗောဓိကုန်း၊ ဇီးပင်သာ ၊ သာဂရ ၊ ပလွေး၊ ပန်းတင် ၊ ဘုရားတောင်၊ ပေပင်လေး၊ သီးကုန်း၊ ပြင်စည် နှင့် စကားအင်း အနီး မိုင်တိုင် အချို့နေရာများသည် ယာဉ်မတော်တဆမှု အများဆုံးဖြစ်ပွား လေ့ရှိသည့် နေရာများဖြစ်ခြင်းကြောင့် သတိပြု မောင်းနှင်ကြရန် သတိချက် ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းအပြင်အမြန်လမ်း မကြီးတစ်လျှောက်အသုံးပြုသွားလာလျက် ရှိသည့်ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်မိုးအခါ ရေဝပ်ခြင်း၊ လမ်းချော်ခြင်းမြင်ကွင်း မရှင်းခြင်းစသည် တို့ကြောင့်လမ်းခရီး တစ်လျှောက် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် လိုရာခရီးသို့ အချိန်မီ ရောက်ရှိစေရေး အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကောင်စီမှ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ၏တိုင်းတာတွက်ချက် သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းအတွင်းမှသာမောင်းနှင်ကြပါရန်နှင့် အမြန် လမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ရဲစခန်းအပိုင်နယ်မြေအလိုက် ယာဉ်တော်တဆမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတတ်သည့် တည်နေရာမိုင်တိုင်များအားသိရှိဂရုပြုမောင်းနှင်နိုင် သတိပေးထားပါတယ်။
အမွနျ လမျးမှာ ကားမောငျး တဲ့ သူတှေ အထူး သတိထား ရမယျ့ နရော (၁၆) ခု ကို ထုတျပွနျ လိုကျပွီ
အမွနျလမျး တဈလြှောကျ ယာဉျမတျောတဆမှု အမြားဆုံးဖွဈသညျ့ နရော ၁၆ နရောရှိပွီး ယငျးနရော မြား အရောကျတှငျ သတိထား မောငျးနှငျးရနျ အမွနျလမျး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးက ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။
ယာဉျမတျော တဆမှု အမြားဆုံးဖွဈသညျ့ နရောမြားမှာ အမှတျ ၃ လမျးဆုံ၊ ဘောနတျကွီး ၊ ဘောနီ၊ အုတျရှဈကုနျး၊ မွို့ခြောငျး၊ ဖွူး၊ ဗောဓိကုနျး၊ ဇီးပငျသာ ၊ သာဂရ ၊ ပလှေး၊ ပနျးတငျ ၊ ဘုရားတောငျ၊ ပပေငျလေး၊ သီးကုနျး၊ ပွငျစညျ နှငျ့ စကားအငျး အနီး မိုငျတိုငျ အခြို့နရောမြားသညျ ယာဉျမတျောတဆမှု အမြားဆုံးဖွဈပှား လရှေိ့သညျ့ နရောမြားဖွဈခွငျးကွောငျ့ သတိပွု မောငျးနှငျကွရနျ သတိခကျြ ထုတျပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။
ယငျးအပွငျအမွနျလမျး မကွီးတဈလြှောကျအသုံးပွုသှားလာလကျြ ရှိသညျ့ခရီးသှားပွညျသူမြားအနဖွေငျ့မိုးအခါ ရဝေပျခွငျး၊ လမျးခြျောခွငျးမွငျကှငျး မရှငျးခွငျးစသညျ တို့ကွောငျ့လမျးခရီး တဈလြှောကျ အန်တရာယျ ကငျးရှငျးစှာဖွငျ့ လိုရာခရီးသို့ အခြိနျမီ ရောကျရှိစရေေး အမြိုးသားယာဉျအန်တရာယျလမျးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေးကောငျစီမှ ကြှမျးကငျြသူ ပညာရှငျမြား၏တိုငျးတာတှကျခကျြ သတျမှတျထားသော အမွနျနှုနျးအတှငျးမှသာမောငျးနှငျကွပါရနျနှငျ့ အမွနျ လမျးမကွီး တဈလြှောကျ ရဲစခနျးအပိုငျနယျမွအေလိုကျ ယာဉျတျောတဆမှုအမြားဆုံးဖွဈပှားတတျသညျ့ တညျနရောမိုငျတိုငျမြားအားသိရှိဂရုပွုမောငျးနှငျနိုငျ သတိပေးထားပါတယျ။
သာမန်လူ ဦးနှောက် နဲ့ စဉ်းစားလို့ လိုက်မမှီ တဲ့ ( က . ည . န ) ရဲ့ ကား တန်ဖိုး သတ်မှတ် ချက်များ